‪#‎OromoProtests‬ “Kan suuraa irratti arkamu kun Bayaan Umareeti kan guyya hiriira guddicha san wareegame. - Oromia Shall be Free
‪#‎OromoProtests‬ “Kan suuraa irratti arkamu kun Bayaan Umareeti kan guyya hiriira guddicha san wareegame.
Guyyaa hiriira guddicha seena qabeessa san keeysatti aanaa Haramayaa Araddaa Karroo Dirree qabsoo keeysatti namni afur haala sukaneeysaan du’uun isaanii ni yadatama. Ammas hidhaafii ummata nagayaa warreen hiriira bahe fidaa jedhanii ummata nagayaa uleen tumanii gara mana hidhatti guuraa jiran yeroo ammaa kana haalli jiruuf jireenyaa baayyee nama yaaddessa.”
Previous ‪#‎OromoProtests‬ Godina H/bahaa Aanaa Fadis tti, hiriira guddicha guutuu Oromiyaa irratti godhame irraa qooda kan fudhatan
Next ‪#‎OromoProtests‬ ‪#‎AmharaProtests‬ ‪#‎Globalsolidarityrally‬ Oslo, Norway; Aug. 19, 2016. ====